मेरा मनका माओवादी-३ – United We Blog
Posted byUWB May 27, 2006 Posted inGuest Column 2
माओवादीसंग बढ्दै गएको मेरो संगतले आमा डराउन थाल्नुभएको थियो … किन किन मान्छे मार्ने कुरामा सहमत हन नसकेपनि उनीहरूले नै अब केही गर्छन कि जस्तो लाग्थ्यो । गाउँमा… उनीहरूले तास बन्द गराएपछि मेरी आमाले खानाको लागि अबेरसम्म बुवालाई कुर्न परेन । मलाई यो कुराले पनि प्रभाव पारेको थियो ।
माओवादी कस्ता हुन्छन् ? स्कुलमा एकदिन शर्मीला भन्ने साथीले भनी, ‘काला, अग्ला डरलाग्दा !!’ ऊ उमेरमा मभन्दा ठुली थिई त्यसैले उसलाई थाहा भएको कुरा साँचो हुनपर्छ भन्ने मेरो विश्वास थियो । मैले उसको कुरा पत्याएको थिए । चियापसलमा माओवादीका कुरा एकदम कम हुन्थ्यो । माओवादीले राजालाई पनि मार्छन, राजालाई पनि छाड्दैनन् रे । यस्तो सुनेपछि त झन शर्मीलाको कुरा हो झै लाग्थ्यो किनकी राजालाई पनि नछाड्नेहरू त साधारण मान्छे नहुनपर्ने । गाउँका बुद्धिजीवीहरू माओवाद भनेको के हो भन्दा पनि माओवादी नेता बाबुरामको चर्चा गर्थे । नारायण वाग्लेले लेखेका कुरा झैं, बोर्ड फस्ट भएको, इन्जिनियर अनि अरू पनि । माओवादीहरूको बारेमा जान्न खासै कोशिस गरीन मैले, किनकी भन्ने मान्छे नै कोही थिएन ।
गाउँमा माओवादीले डकैति पनि गरे । उनीहरूका फाट्टफुट्ट क्रियाकलाप हाम्रो गाउँमा हुन सुरू भएको थियो । हामीले ‘श्रीमान् गम्भीर’ गाउन छाडेर ‘गाउँछ गीत नेपाली’ भन्न थाल्यौं । माओवादी हाम्रालागि असाध्यै डरलाग्दो विषय थियो । कुरा गर्नहुन्न भन्ने थियो मनमा र कुरा नगरेपनि हुने खालको वातारवरण थियो । रोल्पा रूकुम जस्तो तिनीहरूले कसैलाई पार्टीमा लाग्न दबाब दिएका थिएनन् । एकदमै कम मान्छेकोमा मात्र उनीहरू खाना खान आउँथे, त्यो पनि आक्कलझुक्कल । स्कुलमा हुँदा नै रीमा नाम गरेकी माओवादी कार्यकर्तासंग एकरात बिताए मैले। उसले मेरो मष्तिस्कमा माओवाद भर्नखोजी रातभर सुत्न नदिएर । पटकपटक समतामुलक समाजको कुरा गरी रीमाले । त्यसैले बिहान ओछ्यानमा नै चिया पुर्याउन आउनु भएकी मेरी आमाकै अगाडी मैले सोधे, ‘तपाइहरूले मेरो बुवासंगमात्र छलफल गर्नु भो, तपाइहरूलाई खाना पकाएर ख्वाउने मेरी आमाको कुनै महत्व छैन तपाइको माओवादमा ?’
उसले कुनै जवाफ दिइन ।
माओवादीसंगको यो पहिलो जम्काभेट भने थिएन । गाउँका केही चिनेका दाइहरू माओवादी भएका छन् रे ! भन्ने सुनिन्थ्यो तर तिनीहरू शर्मिलाले भने झै काला अग्ला र डरलाग्दा नभएकाले पत्याउन सकेको थिइन । एउटा कुरा चाँही माओवादबाट प्रभावित भएका भनिएका ती दाइहरू क्रान्तिका कविता लेख्थे, अरूभन्दा फरक खालका, सुन्न मजा आउने खालका । आङ् जुरूक्क पार्ने खालका !
रीमा होची, गोरीगोरी ठुला गोला आँखा भएकी सुग्घरी केटी थि । उसले मलाई माओवाद बुझाउन सकिन, मैले थुप्रै पटक हाइ गरेकी थिए । उसले प्रयोग गरेका शब्दहरू नबुझिने खालका थिए । अँ, म उसका नेताहरूको बारेमा जान्न पाउँदा चाँही रमाएकी थिए । अझ घरबार सबैकुरा त्यागेर देशको लागि लड्न हिडेकी उसको जीवन मलाई साहसिक लाग्यो । मैले ‘आमा’ भन्ने उपन्यास पनि त्यहि ताका पढेको थिए । त्यसैले पनि म प्रभावित भए, उसले संगठन भित्रका कुरा सुनाउँदा । उसंग बन्दुक थिएन । मैले सोधेको पनि थिए, ‘माओवादीसंग त बन्दुक हुन्छ होइन र ?’
उसले भनेकी थी, ‘छापामारसंग मात्र हुन्छ ।’ मैले छापामारको अर्थ पनि बुझेको थिइन । सबैजना, ममात्र होइन, उमेरले र अरूकुराले पनि ठुलामान्छेहरू माओवादी भनेका बन्दुकधारी मात्र हुन् भन्ने त सोच्थे नी !
यो सुरूवात थियो, माध्यमिक स्तरमा हुँदा । केही जान्न थालिएको थियो माओवादीका बारेमा । ०५७ सालको अन्त्यतिरबाट मंसीर ११ (पहिलो संकटकाल) सम्म आइपुग्दा म आफु माओवादी नभइकन नै उनीहरूको गतिबिधिसंग र आफुलाई माओवादी भन्न मनपराउने थुप्रै मान्छेसंग नजिकिए । साठीको हाराहारीमा रहेको त्रिलोक उपनामको बुढोमान्छेदेखि 20 मात्र पुगेको शितोष नाम गरेको माओवादी कमान्डरसंग मैले नडराइ हात मिलाए । तीनिहरूसंग तर्क गरे । तिनीहरूको मेसमा पनि खाना खाए । म माओवादी होइन, यो तिनीहरू पनि जान्दथे । तर म उनीहरूप्रति सारै इमान्दार थिए ।
मैले भेटेका माओवादीहरू राजनितीक शिक्षक जस्ता थिए । तिनीहरू तर्क दिन्थे र वुद्धिजीवीहरूलाई आफ्नो सिद्धान्तमा राजी गराउँथे । उनीहरू साधारण पहिरनमा हन्थे । केटाहरूले गोल्डस्टार जुत्ता लगाएका हुन्थे भने केटीहरू फित्ते चप्पलमा हुन्थे । मलाई केटीहरूले मेकअप नगरेको करा सार्है राम्रो लाग्थ्यो ।
माओवादीसंग बढ्दै गएको मेरो संगतले आमा डराउन थाल्नुभएको थियो । म उनीहरूमा रूचि राख्थे । किन किन मान्छे मार्ने कुरामा सहमत हन नसकेपनि उनीहरूले नै अब केही गर्छन कि जस्तो लाग्थ्यो । गाउँमा तासजुवा बन्द भएको थियो । रक्सिको व्यापार हुन छाडेको थियो । मेरो बुवा रक्सि पिउनुहन्नथ्यो तर तास खेल्नुहन्थ्यो । उनीहरूले तास बन्द गराएपछि मेरी आमाले खानाको लागि अबेरसम्म बुवालाई कुर्न परेन । मलाई यो कुराले पनि प्रभाव पारेको थियो । सबै मान्छेहरूमा यो कुराले प्रभाव पारेको थियो । फेरी मेरो प्राथमिक स्कुलको सरपनि बारम्बार ‘बाबुरामले पीएचडी गरेका छन् उनले पक्कै केही सोचेर नयाँ पार्टी खोलेका हुन्’ भनेर भन्नुहुन्थ्यो ।
म ‘दिशाबोध’ पत्रिका नियमित पढ्थे । माओवादभन्दा पहिला माओवादी बुझे मैले । मैले त्रिलोक बुढोमान्छेसंग दुइघण्टा कुरा गरेपछि नाम सोधे । उनले नाम होइन कामसंग मतलव राख भनेर हप्काउने पारामा भने । माओवादीहरू ठट्टा मन नपराउने हुन्थे जस्तो पछिसम्म मलाई लाग्थ्यो । तर उनीहरू बाहिरीमान्छेसंग मात्र त्यसरी बोल्थे । आफु आफुमा चाहि “हाम्रो घर कता ? हामी आराम हो ?” भनेर खुव मज्जासंग कुरा गर्थे । मलाई तिनीहरूले आफुलाई छुट्टै व्यबहार गरेको देख्दा नमज्जा लाग्थ्यो । माओवादीहरू फोहोरी हुन्छन्, गरीब हुन्छन्, कुनै न कुनै रूपबाट सताइएका हुन्थे भन्ने हुन्थ्यो । हुन पनि मैले भेटेकाहरू त्यस्तै थिए । मैले भेटेकाहरूमध्ये रीमा अलि सुग्घरी थी नत्र अरूहरू सबै महिनौ ननुहाए जस्ता लाग्थे । तिनीहरूको शरीर गन्हाइरहेको हुन्थ्यो । लुगा पनि मैला हुन्थे । उनीहरू कोही मेरो बाउलाई पुलिसले मार्दियो भन्थे त कोही हलो जोत्ने हामी खाने अरू ? भन्थे ।
माओवादीहरूबाट पर रहेर मैले पढाइ गर्नु थियो, पढाइ तलमाथी भयो भने घरमा बस्न नपाइने उर्दी सुनाइएको हुन्थ्यो ।
मेरो उमेरका गाउँका अरू मान्छेभन्दा म अलि बढि जान्दथे की जस्तो लाग्थ्यो माओवादीका बारेमा । म कसैकतैबाट हेपीएकी थिइन, मसंग राम्रो जीवन थियो तर देशका बारेमा कुरा गरेकाले पनि म माओवादबाट प्रभावित भएको थिए । संकटकाल सुरू भएपछि मैले चिनेका थुप्रै माओवादीहरू तितरवितर भए । पहिला गाउँमा नियमित जस्तो देखिने तिनीहरू देखिन छाडे तर कोही कतै भेटिने बित्तिकै म उनीहरूको हालखबर सोध्थे । मलाई चिन्ता लाग्थ्यो । ए फलानालाई भेट्नु भयो भने मैले सोधेको छ भनिदिनु है ! मैले खबर पनि पठाउँथे । देश बनाउन हिडेका तिनीहरू मेरा आफ्नै मान्छे हुन् झै लाग्थ्यो । राम्रो पारिवारिक अबस्था भएकाले नै म पक्राउ नपरेको चर्चा पनि चल्यो गाउँमा एकताका, किनकी अरू थुप्रै पक्राउ परे । यो चर्चा गलत पनि थिएन । पक्राउ परेकाहरूलाई जर्वजस्ती आत्मर्समर्पण गराइयो । माओवादीमा लाग्न भनेको मर्नु र मार्नु हो भन्ने कुरा प्रचारमा ल्याइएको थियो । उनीहरू आफैपनि हामी मर्नदेखि डराउँदैनौ, हामीलाई ज्यानको माया छैन जस्ता कुरा बारम्बार दोहोर्याउँथे । मर्ने डर थिएन मलाई, उनीहरूको प्रभाव हुनपर्छ म पनि आमालाई सुनाउँथे, ‘देशको लागि म मर्छु’ । मैले चिनेकाहरू मारीए पनि । त्रिलोक बुढा मारीएको दिन म रोए । ऊ मेरो मान्छे झै लाग्थ्यो ।
उनीहरूसंगको निकट सम्बन्ध सजिलो थिएन । म उनीहरूले झै सोच्छु भन्ने कुरा उनीहरू विश्वास नै गर्दैनथे । मेरो बोलीचालीको भाषामा प्रयोग भएका केही शब्दप्रति तिनीहरूको आपत्ति नै थियो । म र मेरो वर्गका मान्छेहरूलाई उनीहरूले शत्रु भन्ठान्थे । मैले १२ बर्षकी हुँदा सुनेको माओवादी भन्ने वर्गसंग १५ वर्षो उमेरमा साक्षात्कार भएपछि तिनीहरूको बारेमा मेरो आफ्नै विचार भयो । मैले बाबुराम मात्र हैन हिसीला यमी, प्रचण्ड, बादल, महरा, प्रशान्तहरूका बारेमा पनि थाहा पाउन थालेको थिए । मलाई कहिल्यै तिनीहरूसंग कुरा गर्न डर लागेन, म आफ्ना मनमा लागेका कुरा स्पष्ट भन्थे । उनीहरूले नै मान्छेपनि मार्छन भन्ने मलाई विश्वास नै लाग्दैनथ्यो ।
मेरा साथीहरू म उमेरभन्दा बढि पाको हुन खोजेको आरोप लगाउँथे । माओवादी हाम्रा चासोको विषय होइनन् भनेर तिनीहरू सिधै भन्थे । प्रहरीले पक्रे नराम्रो हालत हुन्छ भनेर डर देखाउँथे तर म गोप्य रूपमा उनीहरूलाई आफ्नै सुझबुझले सकेको सहयोग गर्थे । मलाई त्यसो गर्न पाउँदा खै कस्तो ठ्याक्क शब्दमा भन्न नसकिने तर अर्कै अनुभव हन्थ्यो । सायद म मख्ख पर्थे किनकी साथीहरूले आँट्न नसकेको काम आफुले गर्न सकेकोले भन्ने सोचेर होला !
एउटा कुरा चाँहि पक्का थियो, म उनिहरूको देश बदल्ने कुरामा सहमत थिए ।
राजनीति र माओवादका बारेमा रूचि राख्नु मेरो वृत्तमा भएकाहरूको शब्दमा बढी जान्ने हुन खोज्नु हो । अँ, मेरो बुवाको यसमा कुनै आपत्ति थिएन तर उहाँ थाहापाइराख्नु पर्ने विषयमात्र हो भन्नुहन्थ्यो, माओवाद र माओवादी । सायद बुवाले जसरी माओवाद र माओवादीका बारेमा जान्न, बुझ्न हौस्याउनु हुन्थ्यो त्यसरी यसमा लाग्न पनि हौस्याउनु भएको भए म पनि माओवादी छापामार हुन्थे । म र मेरा दिदीबहिनी र भाइ सबैको प्रमुख काम पढ्नु थियो । पढेर ठुलोमान्छे बन्नैपर्छ भनेर हामीलाई सिकाइएको थियो ।
एकदिन कमरेड शितोषलाई सोधे, ‘पढ्नुहन्न ? जहिले पनि हिडिराख्नुहन्छ, कलेज जानुपदैन ?’ आफुभन्दा अलि ठुलो देखेकाले उ कलेज पढ्छ कि भन्ने मेरो अनुमान थियो ।
‘यो तपाइहरूले पढेको बुर्जुवा शिक्षा हो, बेकामको छ,’ उसले भन्यो । ‘हामी यसको बिरोधी हौं । हाम्रो सरकार आएपछि हामी सबै कुरामा परिवर्तन ल्याउँछौ ।’ मैले उसको कुरा राम्ररी बुझेकै थिइन । मेरो पढाइ बुर्जवा रे ! यहि पढेर डाक्टर, इन्जिनियर, वकील जे पनि बन्न सकिन्छ भन्ने थाहा थियो आफुलाई त ! अनि उसले सोध्यो- ‘तपाइको हातमा लाएको घडी बनाउन आउँछ ?’
‘ल हेर्नुस्, जापानमा तपाइको उमेरको मान्छेले घडी बनाउन जान्दछ ।’
उसको कुरा सुनेपछि मलाई गज्जब लाग्यो । ओहो ! म स्कुल पढ्दै उनीहरूको सरकार आए त मैले स्कुलमा हुँदा नै घडि बनाउन जान्ने रहेछु जस्तो लाग्यो ।
‘कहिले आउँछ तपाइको सरकार ?’ मैले सोधे ।
‘समय लाग्छ ।’
‘धेरै । भर्खर त जनयुद्धको थालनी भएको छ ।’
‘ए’, उसको कुराले निराश बनाएको थियो । मेरो बोलीमा पनि निराशा थियो ।
गाउँपछि काठमाडौको यात्रामा माओवादको बारेमा अझ बेसी जानियो तर माओवादीहरूसँगको सम्पर्क भने छुट्यो । रीमाको बारेमा म सोच्ने गर्छु अझ पनि । उ छापामार बन्छु भन्थी । छापामारको अर्थ पनि उसैले सम्झाएकी थिई । कोहीकोहीले बेइमानी पनि गरे । पार्टीले तिनीहरूलाई कारवाही गरेको थियो । म यी सबै कुरा जान्दथे । तर आफैचाही कहिल्यै हतियार उठाउने कुरामा सहमत हुन सकिन । संकटकाल लागेपछि खाल्टोखनेर लुकाएको ‘दिशाबोध’ पनि अझैसम्म खनेर हेरेको छैन ।
(यी सबै लेखहरु गत फागुन महिनामा लेखिएका हुन् जतिबेला देशको राजनीतिक अवस्था विल्कुलै फरक थियो, माओवादीहरु युद्धमा थिए । अहिले शान्तिवार्ता चलिरहेको छ, सम्पुर्ण देश आशावादी छ सकारात्मक परिणाम प्रति । मेरो पनि कामना छ, समश्या समाधान होस् ।)
मायालाई mayablog@gmail.com मा सम्पर्क गर्न सकिन्छ ।
१. मेरा मनका माओवादी-२
२. मेरा मनका माओवादी-१
३. हटब्रेड्स क्याफे
33 thoughts on “मेरा मनका माओवादी-३”
Totally one sided. Maya has totally ignored the fact what maoists has done wrong. And what is this बुर्जुवा शिक्षा. In Japan everybody doesn’t know how to make watch. I wonder if individuals even know how to make watch (except technical people who make watch). They just use and throw the old and broken watch they don’t make it like we Nepalese do.
well done maya, you can writeagood noble. but it seems to be imaginative &#38; impressed by Narayan Wagle’s pulpasa cafe. not only title writing style also ustai uatai chha.